Filtrer les éléments par date : mardi, 07 janvier 2020
mardi, 07 janvier 2020 22:29
"Panier garni" : Fanapahan-kevitry ny Filan-kevitry ny Minisitra no namaritana ilay 65 000 Ariary
« Mitentina 65 000 Ar "panier garni" omena ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny Minisitera tsirairay. Ny Filan-kevitry ny Minisitra dia namaritra io vola io. Tsy mifanaraka amin'ny tapaka tao anatin'ny Filan-kevitry ny Minisitra araky ny toromarika nomen'ny Filohan'ny Repoblika ny fizarana lelavola ankoatra izay », hoy ny fanambarana nataon’ny governemanta androany manoloana ny olana miseho eo anivon'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, Teknika ary Arak'asa, momba ny fizarana io "panier garni" avy amin'ny Filoham-pirenena io.
Misy ankehitriny ny fanadihadiana ataon'ny Inspection Générale d'Etat (IGE) mba hahafantarana ny tompon'andraikitra voakasik'izany, ary miankina amin'ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ny IGE ny fepetra horaisina.
mardi, 07 janvier 2020 22:19
RMDM : “Tsy nahitam-pahombiazana mihitsy ny mpitondra tao anatin’izay taona voalohany nitondrany izay”
Nitondra ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena ankehitriny ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara) androany, raha nihaona tamin’ny mpanao gazety ka nanambara fa “mizotra any amin’ny làlana tsy tokony hizorany ny firenena”. “Tsy nahitam-pahombiazana mihitsy ny mpitondra tao anatin’izay taona voalohany nitondrany izay, fa voa maika aza nandatsaka ny firenena amin’ny fahantrana lalina”.
Tsy voahaja ny demokrasia ary tsy mbola mipetraka eto ny tena demokrasia, hoy ny RMDM. Ny fikasan’ny mpitondra hanova ny làlana laharana 2011-013 tamin’ny 9 septambra 2011momba ny “statut de l’opposition”, izay izy ireo ihany no namolavola sy nandany azy tamin’izany, ary tsy mbola nampiharina akory nefa tadiavina hovaina sahady.
Eo ihany koa ny fanitsakitsahina ny Làlampanorenana sy ny làlana mifehy ny fifidianana. “Demokrasia sarintsariny no tiana hapetraka eto”, hoy ny RMDM.
Mampiahiahy ny fampiharana ny fanjakana tsara-tantana raha tarafina tamin’ny fandaniana ilay lalàna mikasika ny fitantanam-bola 2020 farany teo. Mampiahiahy ary mety hitarika any amin’ny kolikoly avo lenta ny fisian’ilay “fonds souverain” izay tsy fantatra marina ny hampiasana azy, izay midika fa tsy misy fitantanana mangarahara eto amin’ny firenena, hoy ny RMDM.
mardi, 07 janvier 2020 21:58
Lutte contre la malnutrition: Le Groupe Nutriset collabore avec l'État malagasy ainsi que l'Association Fitia
Le Président Andry Rajoelina a tenu une réunion de travail avec une délégation conduite par Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux, pour la concrétisation de ce projet social. La réunion de ce jour, fait suite à la rencontre bilatérale, en marge de la 6ème conférence pour la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme à Lyon.
Lors de la réunion de ce 07 janvier 2020 au Palais d’État d’Ambohitsorohitra, les voies de collaboration avec le Groupe Nutriset, dont la Fondation Mérieux est actionnaire, ont été abordées.
mardi, 07 janvier 2020 19:37
Anjerimanontolo Ambohitsaina: Hikatona ny vavahady manomboka rahampitso Alarobia 08 janoary
Nanatanteraka fivoriambe teny Ankatso ny SECES (Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy mpikaroka-Mpampianatra) Sampana Antananarivo androany 07 Janoary 2020, manoloana ny zava-misy.
Nanao fanambarana izy ireo taorian’izay milaza fa « hikatona ny vavahady eny amin’ny anjerimanontolo Ambohitsaina manomboka rahampitso Alarobia 08 janoary 2020, isaky ny amin’ny 08 ora maraina ka hatramin’ny 04 ora tolakandro ». Hisy kosa ny fepetra manokana ho raisina ho an’ny mponina mipetraka marina ao anatin’ny faritry ny oniversiten’Antananarivo.
Nilaza ny SECES Sampana Antananarivo « zara raha misy ny vahaolana azo tsapain-tànana » mikasika ireo olan’ny mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra ary ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-tsiansa, voarakitry ny fitakiana miisa fito nataon’izy ireo, ka dia hanamafy ny fitakiana izy ireo mandra-pisian’ny « vahaolana mahafa-po ».
mardi, 07 janvier 2020 19:22
Maibahoaka Ivato: Kamiao sady lany "visite technique" no tapaka hisatra, nanitsaka olona
Kamiao iray nitondra akondro nipoitra avy any Talatamaty miazo ny lalana ho any Ivato no nivoaka tampoka ny lalana rehefa naka sisiny ka nifatratra tamin’ny tambohon’ny tranon’ny loholona teo aloha Sylvain Rabetsaroana, eo Maibahoaka Ivato androany atoandro.
Araka ny angom-baovao dia niala moto nivilivily fandeha teo anoloany ilay kamiao no nampifatratra azy tany amin’ny tamboho. Ny hafa indray milaza fa vokatry ny fandehanana mafy no niteraka ny loza.
Nanatona ny Zandary teny Talatamaty avy hatrany ny mpamilin’ilay kamiao taorian’ny loza.
Vehivavy iray avy nitsena mpianatra nirava no voahitsak’ilay kamiao, ka maty tsy tra-drano. Nieren-doza kosa ilay zaza niaraka taminy.
mardi, 07 janvier 2020 18:12
Iran: Nifanitsa-kitro ireo mpandevina ny Jeneraly Qassem Soleimani, 50 no maty noho ny fifanosehina
An-tapitrisany ireo Iranianina sy ireo mpanohana azy no tonga hanatrika ny fandevenana ny Jeneraly Qassem Soleimani, izay nodarofan'i Amerikanina tany Bagdad Irak ny zoma lasa teo.
Nisy ny fifanosehana nandritra izany, ka dia nisy 50 mahery no namoy ny ainy, ary 200 mahery no naratra.
Nilaza ny hanao vali-faty amin'ny Amerikanina moa ny Iranianina.
Miantso fitoniana avokoa ireo firenen-dehibe samihafa.